तपाईको राशीअनुसार कुन कामले दिलाउँछ सफलता ? जान्नुहोस् « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
तपाईको राशीअनुसार कुन कामले दिलाउँछ सफलता ? जान्नुहोस्
१८ चैत्र २०७५, सोमबार १५:०६
काठमाडौ : ज्योतिषी शास्त्रीका अनुसार आफ्नो राशी अनुसार पनि कुन कामले फाइदा बेफाइदा हुने थाहा हुने बताउँछन् । किनभने कसैलाई जागिर फाप्ने हुन्छ त कसैलाई व्यापार फाप्दछ ।
त्यसैले आफलेु राशी अनुसारको काम गरेमा कोही पनि असफल हुदैनन् । यदि तपाई पनि आफ्नो कामबाट घाटा भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने आफ्नो राशी अनुसार यी काम गर्नुस् ।
मेष राशी हुनेहरुको लागी प्रहरी वा सेनाको जागरिमा सफलता मिल्नेछ । त्यसका साथै इन्जिनियरिङ, वकिल, सवारी चालक, प्रविधि सम्बन्धी र व्यवसायमा पनि राम्रै हुनेछ । किनभने यसको स्वामी मंगल हो ।
वृष राशी हुनेहरुको लागी कलकारिता ,संगित, कृषि र व्यवसाय सफलता मिल्नेछ । साथै सजावट, डेरी तिर पनि राम्रै हुनेछ । यसको स्वामी शुक्र हो ।
यो राशी हुनेहरुको लागी शिक्षा सम्बन्धी काम गरेमा सफलता मिल्नेछ । त्यसैले लेखक, इन्जिनियर, अध्यापक , सम्वाददाता र व्यवसायमा पनि राम्रो हुनेछ । यसको स्वामी बुध ग्रह हो ।
यो राशीहरुको लागी जल र काँच सम्बन्धी काममा सफलता मिल्नेछ । त्यसैले कर्कट राशी भएका व्यक्तिहरुले जडीबुटीको व्यवसाय ,किराना व्यापार, विज्ञानका क्षेत्रका कामहरु ,शिक्षक र सामाजिक कार्यकर्ताको काम गर्दा लाभदायक हुन्छ । किनभने यस राशीको मालिक चन्द्र हो ।
सिंह राशीको स्वामी सूर्य भएकाले यो राशीलाई वन अधिकारी ,राजदुत ,पाइलट ,भवन निमार्ण लगायतका क्षेत्रमा लाभदायक हुनेछ । तर यो राशीलाई यी वाहेक अन्य काममा समेत राम्रै हुनेछ ।साथै यस राशिका व्यक्तिहरुलाई पैतृक सम्पति पनि मिल्नेछ ।
यो राशीको स्वामी मंगल भएकाले मेष राशी जस्तै काम गरे हुन्छ । जसमा चिकित्सक , वकिल,प्रहरी वा सेनाको जागिरमा सफलता मिल्नेछ । त्यस्तै ठेकेदार , सवारी साधन चलाउने र धुम्रपान र मद्यपानसम्बन्धी व्यवसायमा पनि राम्रै हुनेछ ।
धनु राशी हुने व्यक्तिहरुको कुण्डलीको स्वामी वृहस्पति हो । त्यसैले यस राशी भएका व्यक्तिहरुलाई सम्पादक ,शिक्षा विभाग ,लेखन ,वकालत ,प्रशासन, शिक्षक र कानुन सम्बन्धी काम गर्दा राम्रो हुन्छ । साथै व्यवसायमा पनि राम्रै हुने योग रहेको छ ।
मिन राशीको स्वामी वृहस्पति भएकाले लेखन, संपादन, अध्यापन ,पशुपालन , कृषि , कलाकारिता जस्ता कार्यमा सफलता मिल्नेछ ।
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०७५, सोमबार १५:०६
वास्तुले भन्छ – गरीबी र दुर्भाग्य हटाउन यी कुरा घरमा नराख्नुहोस्
वास्तुशास्त्रले घरधन्दा होस् वा कामकाज होस्, सबैको बारेमा बताउँछ । वास्तुले प्राय: घरमा के चीज
यस्तो छ चमत्कारले भरिएको हलेसी महादेवको मन्दिर (भिडियो सहित)
कर्कट राशिको शुभ अशुभ के गर्दा फलिफाप हुन्छ ? (भिडियो सहित)
मिथुन राशिको शुभ अशुभ के गर्दा फलिफाप हुन्छ ? (भिडियो सहित)
वृष राशिको शुभ अशुभ के गर्दा फलिफाप हुन्छ ? (भिडियो सहित)
मेष राशिको शुभ अशुभ के गर्दा फलिफाप हुन्छ ? (भिडियो सहित)